တ ကယ် သိ စ ရာ တွေ ရှိ ပါ သေး တယ်
လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံပြောဆိုတဲ့ေ နရာမှာ မိမိဘက်က ထားရှိသင့်တဲ့၊ လိုက်နာကျင့်သုံးသင့်တဲ့ သဘောထားတွေ အပြုအမူတွေနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး လူငယ်တွေနဲ့ စကားဝိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။
အဲဒီစကားဝိုင်းမှာ လူတွေနဲ့ ဆက်ဆံပြောဆိုတဲ့ နေရာမှာ သူအသုံးပြုခဲ့တဲ့ သဘောထားဟာ
(၃)respect ပါလို့ INGO တစ်ခုမှာ ပရဟိတ အလုပ်တွေကို တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်နေတဲ့ လူငယ် တစ်ယောက်က ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။
Posted by ဦးသိန်းဝေ at 6:11 AM No comments:
သတ္တ၀ါတိုင်းဟာ ဖြစ်လေရာ ဘ၀၊ ရောက်လေရာအရပ်မှာ ချမ်းသာချင်ကြတာချည်းပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့မှာ ဆင်းရဲနေကြရတာကတော့ ဘ၀ရည်မှန်းချက်နဲ့ လမ်းစဉ်တွေ လွဲမှား ကြလို့နဲ့ တူပါရဲ့။ ချမ်းသာခြင်းဆိုတာကလည်း အဓိပ္ပါယ်အမျိုးမျိုး ကောက်ယူနိုင်တာကိုး၊ ဒါမှမ ဟုတ် ချမ်းသာစစ် ချမ်းသာမှန်ကို ရှာမတွေ့သေးလို့လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သာဝတ္ထိပြည်ဝယ် ကုဋေလေးဆယ် ကြွယ်ဝသော အာနန္ဒာသူဌေး ရှိ၏၊ သူသည် အလွန်နှမြောတွန့်တိုပြီး ပေးကမ်းစွန့်ကြဲ လှူဒါန်းမှုကို လုံးဝစိတ်မကူးပေ။ သူ၏ တဦးတည်းသောသား မူလသိရီကို ပေးကမ်းစွန့်ကြဲမှု မပြုမိရန် ၁၅-ရက် တကြိမ် သတိပေးလေ့ရှိ၏၊ သူ၏သား မသိအောင်ပင် ရွှေအိုးငါးလုံးကို ကွယ်ဝှက်မြှုပ်ထား၏၊
ထိုအာနန္ဒာသူဌေး ကွယ်လွန်သောအခါ စဏ္ဍာလ (သူတောင်းစား) တဦး၏ ၀မ်းတွင် ပဋိသန္ဓေယူ၏၊ သူမွေးဖွားသည်မှစ၍ တမျိုးလုံး ဆင်းရဲပင်ပန်း ဖြစ်ကြသည်၊ အရွယ်ရောက်လတ်သော် သူ၏ အမေက ခွက်တလုံးပေးကာ အိမ်မှ ထွက်ခွါသွားစေလေသည်၊ တောင်းခံ၍ရသမျှနှင့် မ၀တ၀ စားသောက်နေရရှာသည်၊
တနေ့သော် မူလသိရီ အိမ်ရှေ့သို့ ရောက်သွားသည်၊ ထိုအခါ ယခင်ဘ၀က သားတော်ခဲ့သည်ကို သတိရလာပြီး အိမ်ဝင်းထဲဝင်သွားလေသည်၊ သူ၏ဆိုးဝါးသော ရုပ်အဆင်းကိုမြင်သော မြေးသည် ကြောက်လန့်၍ ငိုယိုရာ အစောင့်အရှောက်များက သူ့အား ရိုက်ပုတ် နှင်ထုတ်ကြသည်၊
ထိုအချိန် မြတ်စွာဘုရား ကြွရောက်လာ၍ မူလသိရီ သူဌေးအား "ဤစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ် သူတောင်းစားသည် သင်၏ ဖခင် အာနန္ဒာ သူဌေးပင်ဖြစ်၏" -ဟု မိန့်ဆိုသည်၊
"အာနန္ဒာသူဌေး သင်မြှုပ်ခဲ့သော ရွှေအိုးငါးလုံးကို ပြလိုက်ပါ"-ဟု မိန့်တော်မူသည်။
သူပြသောနေရာတွင် တူးဖော်ရာ ရွှေအိုးများ ရရှိသဖြင့် မူလသိရီသူဌေး ယုံကြည်သွားကာ မြတ်စွာဘုရားအား ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်ရာ အောက်ပါဂါထာကို ဟောတော်မူသည်။
ပုတ္တာမ`တ္ထိ ဓန`မတ္ထိ ၊ ဣတိ ဗာလော ၀ိဟညတိ ။
အတ္တာ ဟိ အတ္တနော နတ္ထိ ၊ ကုတော ပုတ္တာ ကုတော ဓနံ ။
လူမိုက်သည် ငါ့အား သားသမီးတို့ ရှိကုန်၏။
ဥစ္စာတို့သည်လည်း ရှိကုန်၏-ဟု (စွဲလမ်းမှုတဏှာဖြင့်) ဆင်းရဲပင်ပန်းရ၏။
အမှန်သော်ကား မိမိပင်သော်လည်း မိမိအတွက် အားထားရာ မဖြစ်နိုင်။
သားသမီး ပစ္စည်းဥစ္စာတို့သည် အဘယ်မှာ အားထားမှီခိုရာ ဖြစ်နိုင်ကုန်အံ့နည်း။
သမီးသားနှင့်၊ စီးပွားဥစ္စာ၊ တွယ်တာကြောင့်ကြ၊ လူ့ဗာလသည်၊ သောကမှုပွေ၊ ဆူဆူဝေ၏။
အိုနာသေများ၊ အနီးပါးဝယ်၊ ထင်မှားယူဆ၊ အတ္တသည်ပင်၊ မရှိအင်ကြောင့်၊ ဘယ်တွင်ဥစ္စာ၊ အားကိုးရာသား၊ ရှိနိုင်ငြားအံ့။
( ဗာလ၀ဂ်-အာနန္ဒသေဋ္ဌိ ၀တ္ထု )
ဂတိ=ဘဝကိုက မကောင်းတဲ့ ဘဝ၊ တိရစ္ဆာန်ဘဝ ရောက်စမ်းပါလား။ ငရဲဘဝ ရောက်နေ
စမ်းပါလား။ ပြိတ္တာဘဝ ရောက်နေစမ်းပါလား။
ပုံပြင်တစ်ခုပြောပြမယ်နော်..... ပြီးရင်ပုံပြင်ထဲက အမျိုးသမီးကဘယ်သူလဲပြောပြပေးပါ.....
ဒီပုံပြင်လေးဖတ်ပြီး တို့တွေလဲ မသိလို့ ဘယ်လောက်တောင်မှားပြီးကြပြီလဲ ....သံဝေဂ ရ ..... ချင့်ချိန်တတ်အောင်ပါ.....
★ ★ အခန်း ( ၁ )
အမေ့သားရဲ့ သွေးအစစ်ပါအမေရယ် …. ကျမမလိမ်ရပါဘူး …. သူပြန်လာရင်သက်သေတည်ရပါစေ့မယ် ရှင် …။
ဘုရားအရှင်ရဲ့ အရပ်တော် ကို ဗုဒ္ဓ၀ံသပါဠိတော်မှာ ၁၆ တောင် နှင့် ကျန်တဲ့ အဋ္ဌကထာများက ၁၈ တောင်ရှိတယ်လို့ ရေးထားတာသိရပါတယ်တဲ့ ..... ဘုရားရှင်ရဲ့ အရပ်တော်အစစ် အမှန် ကို သိပါရစေတဲ့ ....။
အချို့သူတွေဟာ သနားကြင်နာစိတ်၊ ညှာတာထောက်ထားစိတ် အင်မတန်နည်းကြပါတယ်။
သတ်ရဖြတ်ရမှာ ၀န်မလေးကြပါ။ နိုင်ထက်စီးနင်း လက်ရဲဇတ်ရဲ သတ်ဖြတ်တတ်ကြပါ
တယ်။ သတ်ရ၊ ဖြတ်ရတာကိုပဲ ကျေနပ်အားရ ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသေရင် ငရဲကို